Hawraartayda Bandhigga Buugaagta Caalamiga ee Hargeysa ! – Goobjoog News
Waxaa maalmahan magaalada Hargeysa ka socdey bandhigga buugaagta caalamiga, kaasi oo socda sanadkii sideedaad oo xiriir ah, waxaa lagu sheegaa in uu yahay kan ugu weyn ee Bariga Africa laga qabto.
Waxaa kale oo magaalada Muqdisho la qorsheynayaa in markii koowaad lagu qabto bandhig buugaag oo caalami ah, kaasi oo dhici doona inta u dhaxaysa 26-da illaa 29 Agoosto, 2015.
Soomaaliya oo ah dal hodan ku ah afka , hidaha iyo dhaqanka ayaa bandhigyadan oo kale waxa ay dusha soo marinayaan maaxda iyo miidda garaadka iyo garashada qofka Soomaaliyeed ee duntiisa fiicantahay.
Sidoo kale waa madal ay dhalinyarada hal-abuurka leh ee alle hibada u siiyey in ay maskaxda tuujiyaan ay kusoo bandhigi karaan kartidooda curin iyo hawraartooda murtiyeysan.
Haddaba inta aanan u galin arrimaha bandhiggani, waxaan marka hore ku hormaraynaa in aan wax iftiimino waxa uu yahay bandhig buugaag.
Waa maxay bandhig?
Bandhigyada Caalamiga ah waxay kasoo xarooda dakhli dhaqaale oo aad muhiim u ah dowladda iyo magaalada marti galinaysa bandhigga labadaba , si loogu guulaysto bandhig kasta waxaa muhiim u ah inuu helo xayaysiin fara badan , xiriir dadweynaha lala yeesho oo wanaagsan , maamul waayo-arag ah oo garanayasha shaqada uu hayo, in dadka kasoo qayb galayaashuna ay helaan Soo-dhawayn fiican iyo caawin , inta badan bandhigyada noocaan oo kale loo sameeyaa way guulaystaan .
Tusaale ahaan dowladda Jarmalka waxaa loo aqoonsanayahay inay kamid tahay dowladaha ugu muhiimsan caalamka uguna badan bandhigyada caalamiga ah ee buugaagta iyo ganacsiga , magaalooyinka dalkaasi waxay ku tartamaan bandhigyada iyagoo samaynaya fududayn fara badan qofka soo booqda iyo qofka soo bandhiga ah labadaba .
Inaad bandhig carweed booqataa waxa ay faa’ido u tahay qof kasta , haddii aad tahay qof maalgashi doonaya waad ka faa’idaysaa , hadaad tahay qof ganacsada ahna waad ka faa’idaysaa , haddii aad tahay qof cilimi-baare ahna waad ka faa’idaysaa natiijaduna waa faa’ido dadkoo dhan soo wada gaaraysa.
Shirkadaha ama hay’adaha inta badan qaban-qaabiya bandhigyadaa caalamiga ah waxay sameeyaan diyaar garaw fara badan si loogu guulaysto bandhigga .
Bandhig Buugeedku waa: hab ah fududaynaya kulan aad la yeelanayso bandhigga kala duwan oo ay soo bandhigayaan shirkado kala duwan caadi ahaanna aan looga baran inay meel kawada shaqeeyaan , waxaanuu kuu fududaynayaa inaan meel kaliya ka wada hesho wax badan oo aad u baahnayd oo buugaag ah adigoo waliba ku helaya waxaad doonayso qiima jaban.
Bandhigga buugaagta caalamiga ah ee Hargaysa.
Waxaa soo qaban qaabiya ururka lagu magacaabo Red Sea Cultural Foundation oo ah urur ka shaqeeya Seeska Hiddaha iyo Dhaqanka oo ah inay ka qayb-qaataan wax kasta oo horumarinaaya taabbagelinta dhigista, fidinta hiddaha iyo suugaanta; xoojinta fanka iyo farshaxanka; baahinta dhaqanka qorista iyo akhriska iyo gaar ahaan kobcinta qoraalka Af-Soomaaliga.
“Red Sea” ama Badda Cas xarunteeda wayn waxa ay ku taalla dalka Talyaaniga waxaa kalooy ka howl galaan Somaliland, waxayna ka shaqaysaa kor u qaadista dhaqanka akhriska iyo qoraalka hal abuurka leh ee bulshada ku hadasha Af-Soomaaliga, iyada oo diiradda si gaar ah u saarta dhalinyarada.
Intaa waxaa dheer, waxaan ay taageeraan oo dhiirigeliyaan warfaafinta iyo isgaarsiinta tiknoolijiyadda ah ee ka shaqayasa horumarinta bulshada Somaliland gudahood.
Waxay dhiirrigelin ku sameeyaan waxyaabaha suugaanta Soomaaliyeed khuseeya oo dhan (maqaalo, taariikhda, sheekooyin, sayniska, gabayo iyo jilidda) oo tayo sare leh; iyo in la siiyo dadka dhallinyarada ah inay helaan dhaqamada dunida iyagoo loo sahlayo inay helaan tarjumidda suugaanta heerka caalami ee caanka ah (oo ay ku jiraan sheekooyin , gabayo iyo jilid intaba).
Ula jeedada ugu waawayn ee ururka loo aasaasay waxaa kamid ah in Somaliland lagu soo jeediyo indhaha caalamka, lagana shaqeeyo horumarinta bushada iyo wax-soo-saarka fikradeed ee dadka.
Ururka waxaa maalgalin uu ka helaa Midawga Yurub iyo hay’ado kale oo caalami ah.
Sanadihii la soo dhaafay iyo wax qabadka Bandhigga Buugaagta Hargaysa.
Sedexdii sano ee lasoo dhaafay ayuu si weyn usoo caan baxay bandhigga buugaagta caalamiga ah ee Hargeysa, isaga oo soo jiitey dareenka saxaafadda iyo adduunka iyo waliba dadka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaanba.
Sanad kasta waxa uu bandhigga leeyahay moowduuc gaar ah oo lagu faaqido, sanadkii 2013-dii waxaa hal ku dhag looga dhigey “Socdaal” macanaha eraygan oo balaaran uga dhigeen In Yool iyo Ujeedo Quman loo sameeyo.
Sanadkii 2014-kii waxaa hal ku dhag looga dhigey “Mala-Awaal” oo loola jeedo curinta maskaxeed ee dadka iyo awoodda ay u leeyihiin in ay maleeyaan, kadibna qoraan xaalad aysan markaasi ku dhex jirin.
Sanadkani 2015-ka waxa uu noqonayaa sanadkii 8-aad oo carwada la qabto, waxaana hal ku dhag looga dhigey “Waa Maxay Baradeydu” oo loola jeedo xeendaabka qofka uu ku muujin karro fikirkiisa, kuna tuujin karo maskaxdiisa isaga oo aanan ka cabsi qabin in fikirkiisa wax lagu yeelo, ama aysan jirin wax soo oodaya in uu maaxdo.
Haddaba akhristoow waxaan halkan kugula wadaagaynaa talooyin dhaxalgal ah oo anfici doona qofka doonaya in uu tago ama ka qeybgalo bandhig buugaag.
Talooyin loosoo jeedinayo dadka ka qayb gala bandhig buugeed yada.
Su’aal waydii naftaada , waa maxay sababta aan u tagayo bandhigga.
Ka digtoonow inuu kugu dhaco jacaylka buugaagta , laakiin ka fakar inaad ka faa’idaysato buugaagta aad iibsanayso, waxaa jira dad badan oo buugaagta guriga ku sharaxa , waxa laga digayaana waa inaad noqoto iyagoo kale.
Ku dadaal inaad soo qaadato buug yar oo xusuus-qor ah si aad ugu qorato waxa aad doonayso ee muhiimka ah .
Waxaad is xasuusisaa danta aad booqashada bandhigga ka leedahay , haddii aad doonayso inaad buug ka iibsato , haddii aad dan ka leedahay inaad ogaato wax cusub, dadka qaar ayaa u booqda inay iskaga cago baxsadaan darteed, laakiin inaad dantaada sii xadaysaa waxay kaa saacidaysaa inaad faa’idada ugu badan aad kala hoyato goobtaa.
Haku sirmin midabka jildiga buugga , buuga qiimihiisu kuma taagna jaldigiisa , waxaad xooga saartaa daabacaadda lagu kalsoon yahay ee hadana la xaqiijiyay.
Dadkii kaaga horeeyay waydii sida macradka looga faaidaysto, talooyinkooda wanaagsanna ku dhaqan.
Kitaab kasta oo ku cajabiya lama iibsado , laakiin waxaad ku dadaashaa in qorshahaaga aad ku dhaqanto oo aanuu kaa burburin.
Markasta tixraac qorshaha iyo jadwalka u degen bandhigga ee qoran ee aad meesha ka heli doontid, waxa ay taasi kaa caawineysaa in aad kala xulatid hadal-jeedinada kala duwan ee ay qorayaasha samaynayaan kana ad dhagaysanayso iyo kan kale.
Waxaad tagtaa meesha maskaxdaada oo furan, hasii qaadan wax fikir ah ama aragti aad ka aaminsantahay bandhigga ama qorayaashaba, kaliya ku camal fal waxa aad meesha kala kulanto
Baarlamaanka Oo Dhageystay Akhrinta Labaad Ee Sharciga Isgaarsiinta
"Human Rights Watch"oo Walaac ka Muujisay Dil loo gaystay sagaal kamid ah hogaamiyaasha Ikwaan Muslimiinta Masar.